Displaying 1181 - 1190 of 1935
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သစ်တောများနေ့ - အပူပိုင်းသစ်တောများအား တရားမဝင်ခုတ် ဖြတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အီးယူမှ ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိ
တရားမဝင် သစ်ခုတ်ခြင်းမှာ သစ်တောများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ကို ပျက်စီးစေပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သစ်တောများပိုမို တာရှည်ခံစေရန်စီမံခန့်ခွဲ နိုင်ရေးအတွက် အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအား အီးယူ မှ ကူညီပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂမှ Cheery Zahau, ကိုဆွေဝင်းနှင့် ဒေါ်ခင်သန်းထွေးတို့အား ယခုနှစ်အတွက်လူ့ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ရှုးမန်းဆုများပေးအပ်ချီးမြှင့်ကာ ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါသည်။
Cheery Zahau, Ko Swe Win and Daw Khin Than Htwe receive EU's 2018 Schuman Award for Human Rights
The European Union in Myanmar honoured Cheery Zahau, Ko Swe Win and Daw Khin Than Htwe with this year's Schuman Award for Human Rights.
Read more about Sustainable Freight and Logistics in the Mekong Region
Read more about Strengthening NSAs' voices for improved forest governance in the Mekong region
La parità tra donneeuomini è uno dei valori fondamentali dell'Unione europea sancito nei nostri trattati. La nostra Unione è pioniere nell'affrontare la discriminazione basata sul genereepossiamo essere orgogliosi dei progressi compiuti: l'Europa è uno dei luoghi più sicuri ed equi per le donne nel mondo.